မြန်မာပြည်တွင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 332
နာရေးကူုညီမှုအသင်း၏ လက်ဆောင် – လူမှုရေးဂီတသူရဲကောင်းများ အမ်တီဗီ
နာရေးကူုညီမှုအသင်း၏ လက်ဆောင် – လူမှုရေးဂီတသူရဲကောင်းများ အမ်တီဗီ မိုးမခရုပ်သံ၊ စက်တင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၂ နာရေးကူညီမှုအသင်းက ထုတ်ဝေတဲ့ ဂီတရုပ်သံအစီအစဉ်ပါ။ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာကွန်မြူနီတီက စုပေါင်း ပြုလုပ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က လက်ရှိဒုက္ခသည်တိုင်းရင်းသားများ ကူညီရေး ရန်ပုံငွေအလှူငွေ ပေးအပ်စဉ်က လက်ဆောင်အဖြစ် ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ အထက်ပါရုပ်သံလေးကို မိုးမခပရိသတ်တွေ အားလုံး ကြည့်ရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Tags: ဆန်ဖရန်, ရခိုင် Related posts ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● အရှေ့တောင်အာရှ အင်ပါယာ (1) ရခိုင်ပြည်က မြန်မာပြည်သူများကို ကူညီရန် ဆန်ဖရန်ဘေးမြန်မာမိသားစုများ ရန်ပုံငွေအလှူပွဲကျင်းပမည် (0) ပန်းခရမ်းပြာ မေတ္တာရှင်များနှင့် အော်ရီဂွန်မှ မြန်မာမိသားစုများတွေ့ ဆုံပွဲ (0) ဇာနီကြီး – မလေးရှားအစိုးရ...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၂ ၁.၉.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ နံနက် (၁ဝးဝဝ) နာရီအချိန်တွင် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ (၉၄) ရပ်ကွက်၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်ရှိ “ထိန်လင်းကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်း” သို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) မှ အလုပ်မှုဆောင် ဦးဖြိုးကိုကို၊ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းမှ တာဝန်ခံ ဒေါ်မိုးမိုးကြည်နှင့် အသင်းသား ဦးဇော်စိုင်းတို့သည် ဆေးခန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား မေးမြန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ကူညီမှုထောက်ပံ့မှု ပြုလုပ်ပေး နိုင်ရန် လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ယင်းဆေးခန်းသည် တစ်ပတ်လျှင် (ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ) နေ့များတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး တစ်နေ့လူနာ (၅ဝ) ဦးခန့်အား ဆရာဝန် (၃) ဦးတို့မှ ကုသဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသည်။ ဆေးဝါး တစ်နေ့တာ ငါးသောင်းကျပ်ခန့်ကုန်ကျလျှက်ရှိပြီး တစ်လလျှင် လေး သိန်းကျပ်ခန့်...
န်းဝင်းလှိုင် စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၂ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းတွင်ထင်ရှားခဲ့သော သခင်ဗဟိန်းကို ၁၉၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၇ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အင်းဝမြို့ ကိုင်းတန်းရပ်၌ အဖ ပွဲစားကြီး ဦးမှင်၊ အမိ ဒေါ်ဦးတို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မွေးချင်း ၇ ယောက်အနက် နို့ညှာဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ မောင်ဗဟိန်းဖြစ်သည်။ ညီ ငယ်မောင်သန်းနိုင်မှာ ဂျပန်ခေတ် မင်္ဂလာဒုံစစ်တက္ကသိုလ် ပထမပတ်ကျောင်းဆင်းဖြစ်၍ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးတွင် တိုင်း (၇) မှ ပါဝင်ခဲ့ သည်။ ငယ်စဉ်က အင်းဝမြို့ မူလတန်းကျောင်း၊ မန္တလေး အေဘီအမ် မိန်းကလေးကျောင်း၊ သကျသီဟဘုရားအနီး ဆရာငုံကျောင်းနှင့် မန္တလေးအမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းတို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၃၅ တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ရာဇ ဝင်...
နာရေးကူညီမှုအသင်း စက်တင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၂ ● NED အတွက် ဦးကျော်သူ၏ ပြည်ပခရီး National Endowment for Democracy (NED) ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ဒီမိုကရေ စီအရေးနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ National Endowment for Democracy (NED) ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူ (၅) ဦးအား ရွေးချယ်ခဲ့ရာတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၂၉.၈.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ ည (၇း၄၅)...
လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်မူကို မည်သူတွေက ပြဋ္ဌာန်းပေးသနည်း ဒေါက်တာဓမ္မပိယ(ITBMU) မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သား အများစုဟာ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်ရေးတို့၏အဓိပ္ပါယ်များကို ရောရော ထွေးထွေး သိနေကြဆဲပါ။ လွတ်လပ်ရေးရရင် လွတ်လပ်ပြီလို့ အထင်ရှိနေသူတွေရှိနေသလို၊ ဒီမိုကရေစီရရင် ထင်ရာလုပ်လို့ရပြီလို့ ပြောသူများလည်းရှိနေဆဲပါ။ ̏လွတ်လပ်ခြင်း˝ ရဲ့အဓိပ္ပါယ်နှင့် ̏လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်̋ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တို့ကိုလည်း မသိသူတွေက များလွန်းနေသေးတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆမိခြင်းပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ကျင့်သုံးနှိုင်ခြင်း မရှိသေးတော့ ရဟန်းရှင်လူ အတော်များများဟာ ̏လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်̋ဆိုတဲ့ စကားရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို အသိခက်နေကြခြင်းပါ။ အဓိပ္ပါယ်များ ရှင်းလင်းသွားစေချင်ရင် လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ကို မည်သူတွေက ပြဋ္ဌာန်းပးထားသနည်း ဆိုတဲ့ အမေးကို ရှေးဦးစွာ စဉ်းစားကြည့်နိုင် ဖို့ပါ။ ̏လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်̋ ဆိုတဲ့စကားဟာ လွယ်မယောင်ယောင်နဲ့...
သန်းဝင်းလှိုင် သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၂ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်များအနက် ယနေ့တိုင်သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသော ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် (၂) ဦးမှာ ဗိုလ်မှူးရဲထွဋ်နှင့် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇောတို့ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော၏အမည်ရင်းမှာ ကိုရွှေဖြစ်သည်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ကိုထွန်းရှိန် (ဗိုလ်ရန်နိုင်)၊ ကိုလှမောင် (ဗိုလ်ဇေ ယျ)၊ ကိုလှ(ဗိုလ်မင်းရောင်) တို့ကဲ့သို့ ကိုရွှေသည် ကျောင်းသားအဖွဲ့မှဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားအဖွဲ့ဆိုသော်လည်း စင်စစ် ယင်းတို့သည် ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ တို့ဗမာအစည်းအရုံးသြဇာခံများသာ ဖြစ်ကြသည်။ ကိုရွှေသည် ဂျပန်စစ်ပညာသင်တန်းတက်စဉ်က ဂျပန် အမည်မှာ “တာနီဂုချိရှင်အိချီ” (Taniguchi Shinichi) ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ဗိုလ်အမည်ခံယူရာတွင် ဗိုလ်ကျော်ဇောဖြစ် လာသည်။ ဗိုလ်ကျော်ဇောကို သာယာဝတီခရိုင် သုံးဆယ်မြို့ဆိုင်းစုရွာတွင် ၁၉၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက် (ကျော်ငြိမ်း၏ ရဲဘော်သုံးကျိပ် စာအုပ်စာ...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) သြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၁၂ Website သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ချိပေးနေတဲ့ ကွန်ရက် (World Wide Web) တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ကြီး (United Nations) မှ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၉) ရက်နေ့တွင် အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဂျီနီဗာကြေညာစာတမ်း (Geneva Declaration on Internet Freedom) ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ထိုကြေညာစာတမ်းတွင် အင်တာနက် (Internet) သည် အတွေးအခေါ်များ ဖလှယ်ရာနှင့် ကူးလူး ဆက်သွယ်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာလေးတစ်ခု (auniversal space) ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်သည် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ပထဝီအနေ အ ထားနှင့် စီးပွားရေးအခြေအနေများကို...
သန်းဝင်းလှိုင် သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၁၂ ၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် အင်္ဂလန်သွား မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ (ဖေ၊ ပု၊ ရှိန်)အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းရှိန်သည် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်း၌ ထင်ရှားခဲ့သော ဝံသာနုခေါင်ဆောင်ကြီးဖြစ်သည်။ “ဖေ” နှင့် “ပု”မှာ ဦးဘဖေနှင့် ဦးပုတို့ဖြစ်ပြီး “ရှိန်” ကား ဦးထွန်းရှိန်ပင် ဖြစ်သည်။ ဦးထွန်းရှိန်ကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၅၂ ခုနှစ် ပြာသိုလဆန်း (၄) ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်မြို့၌ အဖဦးမောင် ကြီး၊ အမိဒေါ်ခင်တို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ဦးထွန်းရှိန်၏ အဘိုး (ဖခင်၏အဖေ)မှာ ရှေးမြန်မာမင်းလက်ထက်က “နေမျိုးသီရိဇေယျနော်ရထာ”ဘွဲ့ရ မြို့စားကြီး ဦးရွှဲဆိုသူဖြစ်သည်။ ဦးထွန်းရှိန်သည် မွေးချင်း (၇) ယောက်အနက် စတုတ္ထမြောက်သား ဖြစ်သည်။ ငယ်မည်မှာ မောင်တာရဲဖြစ်သည်။ မောင်ထွန်းရှိန်ငယ်စဉ်က မိဘများသည်...
ချမ်းမြ၊ သြဂုတ် ၂၇၊ ၂၀၁၂ ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုတောင်းပွဲကို ယနေ့(၂၅-၈-၂၀၁၂)ရက်နေ့ မနက်(၁၀)နာရီတွင် မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏာရာမဘုရားကြီးတိုက်၊ အလယ်တိုက်ကြီးတွင် ကျင်းပကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားကို မန္တလေးမြို့၊ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ ဒုက္ခသည်များ ကူညီပံ့ပိုးရေး ကော်မတီက ကြိုးပမ်းကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ဝါကျွတ်အီး(ဒ်)ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျင်းပနေကျ ပုံစံမျိုးထက် ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော အထူးအစီစဉ် တစ်ရပ်အဖြစ် မန္တလေးမြို့၊ လေးပြင်လေးရပ်ရှိ မဟာထေရ်ဆရာတော်ကြီး အပါး(၃၀)ကျော်တို့အား ဝါဆိုသင်္ကန်းနှင့် ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းသည့် ဆွမ်းကပ်ပွဲကိုပါ ပူးတွဲကျင်းပခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာတို့မှ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းခြင်း အစီစဉ်ကိုပါ ဖြည့်စွက်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ မူလက မန္တလေးမြို့၊ ၆၄-လမ်းနှင့်...
နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန် သြဂုတ် ၂၇၊ ၂၀၁၂ ● မြန်မြန်ပေးမြန်မြန်ဆပ် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၏ (၄) ကြိမ်မြောက် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို ကူညီဖေးမမှုခြေလှမ်း အဖြစ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူနှင့်အဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့သို့ ၂၄.၈.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။ နာရေးကူညီမှု အသင်း (ရန်ကုန်) ၏ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့သည် ၂၂.၈.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့သို့ရောက်ရှိပြီး ဒုက္ခသည်များအား ကူညီဖေးမရန်အတွက် စားနပ်ရိက္ခာများ၊ အဝတ်အထည်များနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကို ကြိုတင်စီစဉ်ပြီးဖြစ်နေလေသည်။ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူနှင့်အဖွဲ့သည် ၂၂. ၈.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကြိုတင်ရောက်ရှိနေသော် ရှေ့ပြေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းကာ ဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်ကာ ကူညီဖေးမကြမည် ဖြစ်သည်။ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူသည် ၂၉.၈.၂ဝ၁၂...
Page 332 of 343«1...330331332333334...343»
Poetry Wave စာစဉ်အမှတ် ၂ လာပြီ https://t.co/ThzoS2FRu1 about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite
အောင်ငြိမ်းချမ်း၊ ဝင်းနန္ဒာ/Myanmar Now ● ဘုန်းကြီးကျောင်း ငရဲခန်းမှာ လပေါင်းများစွာ https://t.co/TugPveIht3 https://t.co/tBsewScZmI about5hours ago ReplyRetweetFavorite
မေငြိမ်း ● မိဘနဲ့ သားသမီးဆိုတာ https://t.co/EUR3M6iPBr https://t.co/CDoTPQsrvf about5hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း လိုင်လုဏ်ရဲ့ ရှေ့သွား … နောက်လိုက် https://t.co/dzQy2uCWhX https://t.co/6AqiNQBQCV about5hours ago ReplyRetweetFavorite
ဒေါက်ထက် (ယူကေ) ● ဘိလပ်ကသူရဲ၊ မြန်မာပြည်ကသူရဲနှင့် ဘီရိုကြီး https://t.co/XxLiuz5EXc https://t.co/nxKjH2pvQF about 8 hours ago ReplyRetweetFavorite